मरेकी आमालाई यी छोरीको प्रश्न: आमा ! क्याम्पस पढ्ने कि तिम्रो किरीया खर्च जुटाउने ? मन थामेर एकपल्ट पढ्नुहोला – पुरा पढ्नुहोस्……
मरेकी आमालाई यी छोरीको प्रश्न: आमा ! क्याम्पस पढ्ने कि तिम्रो किरीया खर्च जुटाउने ? मन थामेर एकपल्ट पढ्नुहोला
ल्मी– सिङ्गो गाउँमा ढुङ्गाका छानाले बनेका अग्ला घरहरु छन् । त्यसै गाउँमा जम्मा दुई वटा घर छन् खरले छाएका । ति खरले छाएका घरमध्ये एउटा घरकोे कथा निकै कहाली लाग्दो छ ।+
यो घरका वावुको १० वर्ष अघि भारतको दिल्लीमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गयो । श्रीमानको मृत्यु पछि निमेक मजदुरी गरेर तीन छोरी हुर्काउँदै आएकी आमाको पनि दुवै मृगौला फेल भई उपचार गर्ने खर्च नभएर केहि दिन अघि मृत्यु हुन पुग्यो ।
आमाको मृत्यु हुँदा १३ र १७ वर्षका छोरीहरुको साथमा सुको पैसा थिएन । धन्न अर्की विवाहित छोरीको साथमा दुईसय रुपैयाँ रहेछ । जुन रकमले कपडा किन्न समेत पुग्दैनथ्यो । अन्ततः गाउँवासीले चन्दा उठाएर उनको अन्तिम दाहसंस्कार भयो ।
यस्तो विपदका विच र समाजको चुनौतिका वावजुद पनि साहघाटमा गएर आमालाई दागवत्ती दिने र काज किरिया बस्ने छोरीहरु हुन् गुल्मीको भनभने गाविसवडा नम्वर ९ टिमुरखर्क रोल्मा गाउँका १७ वर्षिया मिना घर्ति र १३ वर्षिया उनकी वहिनी जमुना घर्ति ।
२०६३ साल माघ १ गते उनका वावु पोमबहादुर घर्तिको दिल्लीमा गाडीले हानेर ज्यान गएको थियो । सामन्य किरिया खर्च दिईयो तर अपराधी पक्राउ गर्ने र उचित क्षतिपुर्ति दिने कुरमा सडकमा कुकुरको जस्तै मराई ठान्यो भारत सरकारले । स–साना तिन छोरीहरु मात्रै भएकी उनकी आमा वालकुमारी घर्ति श्रीमानको मृत्युका वारेमा खोज तलास गर्न सकिनन् ।
सहेर वसीन र ति तिन सन्तान पालन पोषण र पठन पाठनका लागि उनले ढुङ्गा वोक्ने लगायतको निमेक मजदुरी गर्दै आएकी थिईन् ।
अस्पताल जानु , देखाउनुको साटो धामी झाँक्री गराउँदै आएकी वालकुमारीलाई दुवै हिना अघि मात्र वुटवलको एक अस्पतालमा जँचाउन पुगिन् ।
जति वेल उनका दुवै मृगौलाले १० प्रतिशत मात्रै काम गर्न सक्ने भएका थिए । उपचार सम्भव नभएपछि घर ल्याईएकी वालकुमारी माग १६ गते ४५ वर्षको उमेरमा मृत्यु भयो ।
पत्रकारले चन्दा उठाउनु प¥यो
उनिहरुको अत्यन्तै विचल्ली देखेपछि टिमुरखर्क निम्न माध्यामिक विद्यालयका प्रधानध्यापक विरेन्द्र केसीको भने मन खायो ।
त्यहाँ पुग्दा टिलपिल आँखामा आँशु पार्दै आमाको काज किरियाको कुनोमा वसेका ति दुई वहिनीहरु गुहारको मुद्रामा एक्कासी भक्कानो छाडे । डाँडा–भाटा देखिने गरी चुहीन थालेको सानो घरको छानो । तीन महिना पनि खान नपुग्ने जमिन, दिनभरी मजदुरी गरे साँझ चुलो वल्ने नत्र भोकै सुत्नु पर्ने अवस्थाका ति दुई वहिनीको रोदन र चित्कार सुन्दा मन थाम्न सकिएन उनिहरुसंगै बगे आँशु ।
दादा.. आमाले ढुङ्गा बोकेर बडो मुस्कीलले एसएलसी पास गराउनु भएको थियो यसै वर्ष । आमाको उपचार खर्च नै पुराउन नसकेपछि कसरी क्याम्पस भर्ना हौं ? मैले मलाई क्याम्पस बढाउने आमाको धोको पुरा गर्न सकिन भन्दै डाको छाडिन माईली छोरी मिना । कान्छी जमुनाको गहभरिएको थियो ।
केहि वोल्न खोज्दा पनि उनि वोल्न सकिनन् उनको गला अवरुद्ध भयो । त्यो देखेर रिर्पोटिङ्ग कै क्रममा यस समाचारदाताले गाउँवासी विचमा चन्दा अभियान सुरु ग¥यो । दुई दिनसम्मको प्रयासले २० हजार रुपैयाँ संकलन गरेर उनिहरुलाई हस्तान्तरण गरेर फर्किको छ ।
जेनतेन उनिहरुलाई कुनोबाट त उम्काईयो । तर उनको क्याम्पस बढ्ने सपना र कक्षा ९ मा पढ्ने उनकी वहिनीको कम्तीमा पनि एसएलसी पास गर्ने सपना जसरी पनि पुरा गराएर छाड्ने छु भनि दिएको आस्वासन पुरा गराउन समाचारदाताले सवैसंग सहयोगको अपिल गर्दछ ।
प्रधानध्यापक विरेन्द्र केसीको संयोजनमा सहयोग संकलन अभियान सुरु गरिएको छ । कृपया देश विदेशमा रहनु हुने पुर्कोट, धुर्कोट , ईस्माकोट, मुसिकोट लगायत सम्पुर्ण गुल्मेली तथा अन्य जिल्लाका महानुभावहरु उच्च शिक्षा हाँसिल गर्ने मिना र जमुनाको सपना पुरा गराई दिने तर्फ सोची दिनु होला । विवाहित छोरी रिता पनि सवैसंग त्यही अपिल गर्दछिन् ।
‘मैले के गर्न सक्छु र घरमा लगेर पालौ वहिनीहरुलाई भने कुनै दिन नमिठो वचन सुन्नु पर्ला’– रिताले गहभरी आँशु पार्दै भनिन –‘मैले तपाईको सञ्चार माध्यम मार्फत सवै संग यहि आग्रह गर्दछु कि यि मेरा वहिनीहरुको क्याम्पस पढ्ने सपना पुरा गराई दिनु होला् । ’
सहयोगदाताले ति विचल्लीमा परेका वहिनीहरुलाई सिधै सम्पर्क राखेर सहयोग गर्न सक्नु हुने छ । उनिहरुको मोवाईल नम्वर ९८११४७४३३८ रहेको छ । प्रधानध्यापक विरेन्द्र केसीको नम्वर ९८४४७०१५१३ मा सम्पर्क राखेर पनि सहयोग गर्न सकिने छ ।
चुनावमा पैसाको प्रलोभन
ति विचल्लीमा परेका दुई वहिनीहरुको अवस्था बुझ्न कुनै राजनैतिक दलका नेता यहाँ आए ? भनेर ८ र ९ का वासिन्दाहरुलाई सोधखोज गर्दा सवैले एकै स्वरमा भने–‘ किन आउन यस्तो वेलामा चुनावको वेलामा पो राती तिनचार वजे तिरै आउँथे र दाल चामल र पैसाको समेत प्रलोभन देखाउँथे ।’ उनीहरुको आँगनमा वसेर रिर्पोटङ्ग गर्दा गाउँका सयौं दलित, जनजाती र अन्य समुदायका मानिसहरुको भिड लागेको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश महिलाहरुले राजनैतिक दलविरुद्ध वितृष्णा व्यक्त गरे । उनिहरुले भने यस्तो विपद पर्दा फर्केर नहेर्नेहरुले किन सपना बाँड्नु ?
Prevरियल मड्रिडमा ‘धोका’ भएको रोनाल्डोको ठहर, म्यान्चेस्टर युनाइटेड फर्किने मनस्थितिमा (पुरा जानकारी हेर्नुहोस )
Next१० बर्षको बालक संग १८ बर्षको युवतिको विवाह, कारण यस्तो बिचित्रको
धनकुटाको ऐतिहासिक टुंडिखेल बनेको दुई बर्ष पुरा नहुदै जोखिममा (भिडियो सहित)
दोहोरी गा*एर भाइल कमला घिमिरेको दशैं : किन भावु*क बनिन् दशैंको दिनमा- हेर्नुहोस् ( भिडियो सहित )
कहाँबाट बोल्नुभो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भन्दिन्छु, को बोल्नुभो भने भने प्रधानमन्त्री ओली भन्दिन्छु: रविले किन यस्तो भने ?- हेर्नुहोस भिडियो सहित